Home Wararka Itoobiya oo sheegtay in ay la wareegi doonto dekadaha Soomaaliya! Farmaajo muxu...
Itoobiya oo sheegtay in ay la wareegi doonto dekadaha Soomaaliya! Farmaajo muxu ka ogyahay?
Itoobiya ayaa sheegtay iney adeegsaneyso dakadaha waddamada deriska la ah si ay uga kaaftoonto ku tiirsanaanta dakadaha Jabuuti oo keli ah. Hadalkaan ayaana salka ku haya in Itoobiya ka go’aan tahay in ay la wareegto dekadaha Soomaaliya.
Barafasoor Matiwos Insermo oo ka takhasusay cilmiga Logistika kana tirsan Jaamacadda Adiis Ababa wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan tahay Itoobiya in ay Dekad ku hesho Iib, Gorgortan ama Kiro.
Dowlada Itoobiya oo isticmaalaysa Farmaajo oo waqtigiisa sii dhamaanaya ayaa ay heshiisyo aan la shaacin la gashay dowlada Soomaaliya, heshiisyadaas ayaana laga qariyay baarlamaanka Soomaaliya, waxaan la rumaysan yahay in heshiiskaas ay qayb ka ahayd in dakadaha Soomaaliya lagu wareejiyo Itoobiya.